Shirkada Sahal Gas oo sheegtay in ay qiimo dhimis ku samaysay gaaskeeda - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandShirkada Sahal Gas oo sheegtay in ay qiimo dhimis ku samaysay gaaskeeda
September 4, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Maamulaha guud ee Sahal Gas Cabdiladiif Cabdulaahi Nuur. Sawirka: Puntland Mirror.
Boosaaso-(Puntland Mirror) Shirkada gaaska cunta lagu garsado ee Sahal Gas ayaa sheegtay in ay qiimo dhimis ku samaysay gaaskeeda, sida uu sheegay maamulaha guud ee Sahal Gas Cabdiladiif Cabdulaahi Nuur oo la hadlay warsidaha Puntland Mirror maanta oo Axad ah.
“Waxaanu jabinay gaaska iyadoo hadda laga bilaabo lagu helayo qiimo aad u jaban aadna ka dalban karto meel kasto oo aad joogto,” ayuu yiri Cabdiladiif Cabdulaahi Nuur.
Maamuulaha ayaa sheegay in sababta ay u jabiyeen qiimaha gaaska ay tahay iyadoo shirkadu doonayso in la gaaro himilooyinkii loo asaasay oo ay kow ka tahay dhaqaalaynta dhirta iyo qancinta macaamiisha shirkada.
“Waxaan dhamaan macaamiishayada sharafta leh la socod siinaynaa in shirkada Sahal Gas ay jabisay qiimaha gaaska lagu iibsan jiray dhamaan gobolada Puntland iyo gobolada dhexe ee Soomaaliya, sababta keentay in aan jabino qiimaha waxa weeye shirkada oo doonaysa in la gaaro himilooyinkii loo asaasay oo ay kow ka tahay dhaqaalaynta dhirta iyo macaamiisha shirkada ee sharafta leh si ay u helaan qiimo jaban” ayuu ku daray maamule Cabdiladiif.
Qiimaha haamaha ayaa laga dhigay sida maamuuluha uu sheegay sidaan: Boosaaso 20kg waa $38 dollar, Qardho 20kg waa $37 dollar, Garoowe 20kg waa $33 dollar, Gaalkacyo 20kg waa $39.
Sahal Gaas ayaa ah shirkada ugu weyn ee Puntland keenta Gaaska cunada lagu garsado, dhawaan ayaa shirkadu waxa ay ka dhisatay xeebta Boosaaso haamo waa weyn oo kaydiya gaaska oo ay ku bixeen malaayiin dollar, si looga kaaftoomo gaaskii go’I jiray wakhtiyada qaar.
Wasiirka arrimaha dibada Ruushka oo Madaxweyne Putin u jeediyay in 35 diblomaasi oo Mareykan ah laga ceyriyo Ruushka si looga jawaabceliyo go’aankii Mareykanka
Moscow-(Puntland Mirror) Ruushka ayaa maanta oo Jimce ah iclaamiyay inuu qorshaynayo inuu dalkiisa ka saaro 35 diblomaasi oo Mareykan ah iyadoo looga jawaabcelinayo cunaqabataynta Washington, sida ay ku warameen wakaaladaha wararka Ruushka. Wasiirka arrimaha dibada [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Tirada dhimashada ee qaraxii ka dhacay Muqdisho Khamiistii ayaa gaartay 18 qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadaka iyo ammaanka. Qaraxa ayaa ka dhacay meel u dhow huteel Waheliye oo saaran wadada mashquulka badan [...]